Maalinta: Abriil 8, 2018
Intii lagu gudajiray booqashada Raiisel wasaare Binali Yıldırım ee İzmir, wuxuu yiri, hakkında Waxaan sameynay dhammaan noocyada diyaarinta. Waxaan fileynaa in Izmir uu diyaar noqon doono ”. Raiisel wasaare Binali Yildirim usbuucii hore [More ...]
Kocaoglu: Iskudhinimo Labo Xariir Ah Oo Laga Soo Saaray Halkapınar-Otogar
Duqa Magaalada Magaalada İzmir Aziz Kocaoğlu ayaa hadalo muhiim ah ka jeediyay laba xafladood oo furitaanka xarunta Foça iyo Gerenköy. Duqa Kocaoğlu, iyo meesha tareenka loo yaqaan Halkap Halkanar-Otogar [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare Heerka Gaadiidka ee Bursa
Waqtigu si dhakhso leh ayuu u socdaa… Markii ugu horreeysay ee aan wax ku qori lahayn 1993, suurta galnimada tareenka Bandırma-Bursa-Osmaneli wuxuu ku jiray ajandaha Guddi hoosaadka Gaadiidka TGNA. Bilowga sanadka 2011, Wasiirka Shaqada iyo Amniga Bulshada ee muddada Faruk Celik wuxuu ku dhawaaqay in hindisada ay ku farxi doonto [More ...]
Madaxa Isgaadhsiinta - Madaxweynaha Ganacsiga Toruntaydan Taribuunka Saddexaad
Mustafa Toruntay, Madaxweynaha Ururka Ganacsiga şız Taşıma-;; Maddaarka Diyaaraddeenna saddexaad, oo ah garoonka ugu weyn adduunka, ayaa dadka qaarkood khalkhal gelin jiray ka hor inta aanu dhammaan. Saxaafadda reer Yurub iyo gaar ahaan saxaafada Jarmalka [More ...]
Playa ee Dimuqraadiyadda Dimuqraadiga ah ee Alia helda waxay qabatay war-saxaafadeed ka dhan ah nidaamka lacageed ee togan ee laga hirgaliyay İZBAN. Playa ee Aliağa Labour iyo Dimuqraadiyadda ayaa qabtay war-saxaafadeed ku saabsan nidaamka lacageed ee lagu daray İZBAN. Platform, “İZBAN [More ...]
Howlaha jidadka ee laga gudbo Bozüyük Yeşilkent heerka isgoyska ayaa sii wada shaqada buundada ee Kocadere. Dhisida xad-gudubyada xad-dhaafka ah ee curyaamin doona isgoyska heerka ee xaafada Yeşilkent [More ...]
Gaadiidka ku yaalla Boosaasta waxay la qabsadaa xawaaraha qulqulka
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa, isgoyska 29-ka si looga hortago dhibaatada taraafikada ee magaalada ayaa bilaabay in ay si dhaqso leh uga shaqeeyaan sharciga. Yaraynta cufnaanta taraafikada boqolkiiba 35-40 boqolkiiba dhamaadka sanadka [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun ayaa la ciyaari doonaa berrito kulanka ka dhacaya Istanbulspor kulankaas oo ay tagi doonaan taageerayaasha garoonka oo bixin doona adeegan taraafikada bilaashka ah. Spor Toto 1.Lig berrito (8 Abriil) wuxuu noqon doonaa kulan muhiim ah Istanbulspor Samsunsporlu [More ...]